Xha ga mshelana - Fumana uqeqesho lwe-BSF yeMaggot Ukulima • U-Yurie BSF
Xhumana nathi Yurie BSF - Ufuna ukuqala ukulima umququ ngaphandle kokuhogela? Okanye unako, kodwa iziphumo azinako kwaye zivumba? U-Yurie BSF ulungele ukukunceda, nceda uqhagamshelane no-Yurie BSF ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo ngezansi, u-Yurie BSF ulapha ukunceda
Nceda uqhagamshelane no-Yurie BSF uze uthumele umbuzo wakho kuNks. Yurie ngqo kwiTel / WA 0812-2105-2808. Okanye xhumana nathi nge-imeyili [Imeyile ikhuselwe] Bhala ingcaciso oyifunayo kwaye siya kuyiphendula ngokukhawuleza.
Nawuphi na umbuzo? qhagamshelana nathi ngefowuni kwaye uthetha nathi, thetha kwiingcali. Unokucwangcisa ixesha lokubiza ukuba ulungele kwaye siya kunika iimpendulo ezifanelekileyo kunye nokukhetha.
Xha ga mshelana kwiNkxaso yeFree
Amaninzi amaninzi okulima amagosa ahamba kunye nenkxaso yamahhala ngesikhokelo kwiwebhusayithi ye-Yurie BSF. Sinikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kwi-BSF ukulima, kwaye sinika iziqinisekiso zokuncedisa impumelelo. Kuphela kufuneka uthenge iphakheji yomsebenzi oyifunayo xa usebenza ekhaya okanye kwifama yakho.
Ukukhethwa kwe-99 ye-Yurie BSF indawo zeefama
Hlaziya iqela lokuqala, elincinci, eliphakathi nelikhulu lemaggot
Maggot ukuthenga nokuthengisa
Ukulima kwe-FAQ yeMaggot, kwaye
Ukuhlaziywa ngeveki yokulima umlingo.
Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi naliphi na ixesha.
Uphando olufanayo: Qhagamshelana nathi, qhagamshelana nathi, qha ga mshelana yurie bsf, qhagamshelana nathi